Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Seranam-piaramanidina Bangkok hanompoana hopitaly ambanivohitra COVID-19
Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Hopitaly an-tsaha COVID-19
Ny minisitry ny fitaterana any Thailandy Saksayam Chidchob dia nilaza tamin'ity faran'ny herinandro ity fa ny fandaminana fandriana 7,000 hafa dia natao noho ny toe-javatra misy ny coronavirus ankehitriny amin'ny endrika hopitaly COVID-19, satria marobe ny marary miandry fitsaboana.
Hatsangana ny hopitaly ambanivohitra COVID-19 any amin'ny faritra tsy ampiasaina amin'ny seranam-piaramanidina 2.
Ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi fotsiny dia afaka mandray marary mihoatra ny in-3 mihoatra ny hopitaly Bussarakham.
Niditra an-tsehatra niaraka tamin'ny vaksiny AstraZeneca 1.5 tapitrisa dosis i Japan mba hanampiana an'i Thailand amin'ny ady atao amin'ny COVID-19.
Ireo faritra tsy ampiasaina any amin'ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi sy Don Mueang dia samy hampiasaina amin'ny fananganana hopitaly eny an-tsaha.
Nilaza i Saksayam fa nahavita fifanarahana vonjimaika ny governemanta Seranam-piaramanidina Thailand (AOT), satria tapitra amin'ny volana Aogositra ny fampanofana ho an'ny Hopitaly Bussarakham ao amin'ny Impact Muang Thong Thani any amin'ny faritanin'i Nonthaburi.
Raha ny filazan'Andriamatoa Saksayam, ny hopitaly ao amin'ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi dia afaka mandray mihoatra ny in-3 ny isan'ny marary ao amin'ny Hopitaly Bussarakham. Ankoatr'izay, ny seranam-piaramanidina Don Mueang dia eo am-panomanana trano fanatobiana entana ho an'ny fananganana hopitaly an-tsaha, izay misy Farafara 2,000 XNUMX ho an'ny marary miaraka amin'ny soritr'aretina malemy.
Niditra an-tsehatra nanampy i Japon
Ny governemanta Thai dia nanao lanonana ofisialy tamin'ny 12 Jolay mba handraisana vaksinina AstraZeneca COVID-1.5 vaksiny 19 tapitrisa natolotry ny governemanta Japon mba hanampiana amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny COVID-19.